Maitiro ekudzivirira maitiro kubva kukutevera iwe neIOS 14.5 | IPhone nhau
Maitiro ekudzivirira maapplication kubva kukutevera neIOS 14.5
Luis Padilla | 27/04/2021 10:00 | iOS 14, Zvidzidzo uye zvinyorwa
IOs 14.5 inosvika kuzotibvumira kuvhura yedu iPhone yakapfeka mask, nekuda kweApple Watch yedu. Asi zvakare kunounza chimwe chinhu chakakosha pachivande chedu: kuteedzera kuvhara mukushandisa.
1 IDFA uye kutevedzera kunyorera
2 iOS 14.5 inochinja zvese
IDFA uye kutevedzera kunyorera
Zvinozivikanwa kune vese kuti chiitiko chedu patinosecha internet, kana kushandisa mashandisirwo akakanganiswa. Kwenguva yakareba, Apple yanga ichitora matanho akakosha kuti vashandisi vadzore zviri zvedu, dhata redu, uye tinoziva kuti ndiani anoishandisa, uye zvinotonyanya kukosha, tinopa mvumo yekuishandisa kana kwete. Uye nekusvika kweIOS 14.5, danho hombe rinotorwa mune izvi, nhanho iyo vashambadzi kana mamwe makambani anorarama nekushambadzira vasina kufarira, uye kuti vanoshandisa data redu kutipa zvakanangwa zvakanyanya, zvakakosha uye zvinodhura kushambadzira.
Sezvo iOS 6 pane izvo zvinonzi IDFA, icho chisiri chinhu chinopfuura chinongedzo icho vashambadzi vanoshandisa kutitevera. Kana isu tavhura paInternet kana kuvhura kunyorera, iyo yese iyo ruzivo inosanganisirwa neiyi IDFA, uye vashambadzi vanokwanisa kuwana kwairi, vachiziva izvo zvatinofarira. Nenzira iyi vanotipa kushambadzira kunoenderana nevanhu, kwakanangana nezvatinofarira zvenguva iyoyo, zvirinani kupfuura zvatinoona paterevhizheni uye zvatinozeya nekuti hatifarire. Kana iwe uchitsvaga iyo surfboard, uye iwe ukapinda muAmazon uye kamwe kamwe surfboards inoonekwa kwese kwese, zvinowanzoita kuti ungazopedzisira watenga imwe. Ndokusaka iko kuwana kune data redu iro vashambadziri vanaro kwakakosha kwazvo. IDFA ndiro rezinesi redu, iro ravanotisora ​​vachiramba vachiziva kufamba kwedu kwese.
iOS 14.5 inochinja zvese
Kuuya kweIOS 14.5 kunochinja bhizinesi rese iri. Iye zvino maficha achafanirwa kutikumbira mvumo yekugona kutitevera, uye isu tichava ivo vanosarudza kana tichida kubvumidza iyo yekutevera kana kwete. Pamusoro peiyi sarudzo yakasarudzika nekushandisa, tinokwanisa kuwana zvigadziriro zvechigadzirwa chedu uye tosarudza kuti hapana chishandiso chinogona kutikumbira kuteedzera uku, kuti tirege kutombozvinetsa nekutaura kuti kwete. Muvhidhiyo unogona kuona zvese zvasarudzo zvakakwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Maitiro ekudzivirira maapplication kubva kukutevera neIOS 14.5
Mumwe mubvunzo, iyo sarudzo pane menyu yaiwanikwa kwenguva yakati. Muchokwadi ini handisati ndavandudza kusvika pa14.5 (ini ndiri muna 14.4.2) uye zvinoratidzika kwandiri. Ini ndakaremara uye pandinodzvanya pane iyi link «Dzidza zvakawanda» inoti ivo vanogadzira maApplication vane basa rekushandisa sarudzo iyi (ndinayo muChirungu uye inoti «Vagadziri veApp vane basa rekuona kuti vanoteerera sarudzo dzako. »).
Saka izvi zvinoshanduka ne14.5 uye haisisiri sarudzo yeapp? Ndatenda.
Ini ndinozvipindura. Ini ndichangobva kuvandudzwa kusvika 14.5 uye ikozvino chinongedzo chinoti «Kana iwe uchiramba (…) iyo app inodzivirirwa kubva pakuwana yako Yekushambadzira Chitupa» izvo zvaisina kumbotaura zvisati zvaitika, kunyangwe ichiri kuramba ichitaura gare gare nezve «App vagadziri vane basa rekuona kuti teerera sarudzo dzako ».
Nyowani vhezheni inowanikwa yeCrash Bandicoot: Pakumhanya!